Ubuso obusha beCervantes. | Izincwadi Zamanje
U-Alex Martinez | | Umlando wezincwadi
Ukukhuluma ngoMiguel de Cervantes Saavedra ukukhuluma ngezincwadi uqobo, ze ukukhipha umlando wezwe lethu ngekhodi ebhaliwe. Ngeke ngibe umuntu ongazibeka endaweni yami ethobekile, ukuveza izimangaliso zombhali we-Alcalaíno. Hhayi ngoba ngifuna ukubakhumbula, usuku luzofika, kodwa ngoba impela ngeke kube khona muntu, noma kungafanele kube khona, ongamazi "umuntu ohlomile weLepanto" noma umsebenzi wakhe. Yize, mhlawumbe nalaba bokugcina, ngonile ngesibindi, ngivumele ngiveze iota elincane lokungabaza maqondana nolwazi lwamasiko lokhu, umphakathi wethu. Akukhona ukuthi nginombono wokungabi nathemba ngakho, ngicela ungangiqondi, kepha ukuthi, ngesikhathi senginolwazi emisebenzini ehlukahlukene yempilo, ngikwazile ukubona ukuthi, kwezinye izimo, kunesithakazelo esincane kakhulu Izincwadi zaseSpain ziyabhekisela.
Yini engingathanda ukuxoxa ngayo isiqephu esisha sezindaba, ngokubona kwami, sihlanganisa ubuciko nomlando, okusinika, abathandi bezincwadi ezivela enkathini yegolide yaseSpain, ubuso obusha bokuphupha ngempilo kaMiguel de Cervantes wethu oyigugu. Lapho sikhuluma ngobaba kaDon Quixote noSancho omdala omuhle, ngokuqinisekile isithombe somdwebo odume kakhulu lapho ubuso bakhe buvela khona kithi sonke. Ngokuphawulekayo, nguCervantes, ukubukeka kwawo kwangempela akwaziwa kusukela lapho kuthiwa umdwebo, okushiwo umdwebi uJuan de Jáuregui, wenziwa ngokulandela incazelo yombhali uqobo. Incazelo evela esandulelweni kumfundi wezincwadi zakhe "Amanoveli ayisibonelo." Isingeniso esibhaliwe, konke kungashiwo, eneminyaka engama-66 nokuthi, ngakho-ke, kusinikeza umuntu oneminyaka yobudala isikhathi futhi kuphela iminyaka engu-3 ngaphambi kokufa kwakhe (1616).
Cishe ngesonto eledlule, umdwebi weBarcelona U-Augusto Ferrer-Dalmau wethule umsebenzi wakhe omusha emphakathini kusimangaze sonke ngomdwebo lapho ophikisayo kunguMiguel de Cervantes uqobo. Umehluko kweminye imisebenzi ukuthi, kulo mcimbi, umbhali umelwe no iminyaka engama-24 kuphela e-Battle of Lepanto, ungene ngaphakathi kweGalera Marquesa futhi uzungezwe ama-morriones, amaTurkey afile kanye nemikhumbi. Umdwebo omuhle osithutha, ngendlela yokwenza umlingo, uye ezimpini ezibaluleke kakhulu emlandweni waseSpain nokuthi, kumuntu wokuqala, waphila kanjani othathwa njengongqondongqondo omkhulu wezincwadi zethu. Singabona iphunga lesibhamu, sizwe enyameni yethu ubuhlungu umlobi abuzwa ngemuva kokudutshulwa kabili kwesifuba sakhe futhi azizwe emangele ebusweni bakhe, edelela futhi enama-stoic, ebuka isitha emgodini we-galley. washintsha impilo yakhe unomphela. Leyo mpi ayigcinanga ngokunika isandla sakhe usizo, kepha futhi yagcwalisa iCervantes ngokuziqhenya, Kukho konke ukuphila kwakhe, wayeneliseka kakhulu ngokubamba iqhaza empini enjalo.
Ngenxa yalowo obhekwa njenge- "Velázquez yekhulu lama-XNUMX", singabheka ebusweni beCervantes entsha efakwe esahlukweni somlando wakhe ukuthi, ngaphandle kokungabaza, kube nomthelela empilweni nasemsebenzini wakhe. Isahluko ukuthi ngamafuphi, sesifikile ezinsukwini zethu njengosuku lapho umchazi omkhulu wezingoma zethu athola khona igama lesidlaliso elithi "one-armed from Lepanto".
ICervantes ngokusho kuka-Augusto Ferrer-Dalmau.
Noma ngubani ofuna ukubona isithombe sonke angavakashela i- iwebhusayithi esemthethweni yomdwebi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Umlando wezincwadi » Ubuso obusha beCervantes
Ngihlanganyela nawe uthando lwezincwadi nomlando. Ngiyawuthanda nomlando wezempi.
Ngibone lo mdwebo kaFerrer-Dalmau ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kwi-Intanethi. Owokugcina. Vele, kuyamangalisa ukuthi upenda kanjani. Bengingazi ukuthi bambiza ngokuthi "uVelázquez wekhulu le-XXI" (angazi noma ngobulungiswa noma ngabe kuyihaba).
Kuyathakazelisa ukuthi umsebenzi ekuqaleni kwendatshana kuthiwa wenziwe ngumculi (angisalikhumbuli igama manje, ngiyakhumbula ukuthi livela eGolden Age) ngaphandle kokuqiniseka ukuthi umqambi ungowakhe. Kubonakala kimi ukuthi ochwepheshe basikisela ukuthi yikhophi elenziwe ngezinye izandla.
Ukubingelela okuvela e-Oviedo futhi ngiyabonga ngokwabelana ngalolu lwazi.
U-Alex Martinez kusho
Okokuqala, ngiyajabula ngokuthi ukuthandile ukungena. Isihloko segama lomdwebi; Ngiyikhiphe ezihlokweni ezahlukahlukene lapho eqhathaniswa khona noVelazquez. Ngokusobala, ukumqhathanisa nomlingiswa onjalo kuseyindlela yokuhlola umsebenzi nomsebenzi ka-Augusto Ferrer-Dalmau futhi singakhuluma, ngaphandle kokungabaza, ngehaba eligcwele. IVelazquez kwakukhona eyodwa ngakho-ke bonke abanye bangabafundi nje be-genius (IMHO). Noma kunjalo, kufanele ubonge kuphela imisebenzi yakhe ukuze ubonge ikhono lalo mculi. Cishe ukuphela komculi ezweni lethu.
Ngakolunye uhlangothi, inhloso yami ukulayisha izindatshana ngezihloko ezahlukahlukene. Kunoma ikuphi, ngiyakuqinisekisa ukuthi umlando wezincwadi zethu nezikhombo zawo kuzodlala indima efanelekile emibhalweni yami yesikhathi esizayo. Njengomuntu othanda umlando nomlando wezempi, angikwazi ukukuvimbela lokhu ukuthi kwenzeke, ikakhulukazi ngokwazi ukuthi inani elikhulu lababhali belingamasosha ngasikhathi sinye. Ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho kanye nokuhaxa okuvela eBarcelona.
Phendula u-Alex Martinez
PS: Ngadideka futhi ngacabanga ukuthi isihloko senu saqala ngaphansi kwesithombe esidumile esashiwo uJuan de Jáuregui. Leli kwakuyigama.
Ilungelo lokubhala ngolimi lwakho